डाउनट्रेण्डमा बजार : २७०० मा सपोर्ट - Laltin.com
डाउनट्रेण्डमा बजार : २७०० मा सपोर्ट
Downtrend Stock Chart 3D Illustration
काठमाडौँ । साताको सुरुवातमा नेप्से परिसुचक १०८.२६ बिन्दुले घटेर २८१८.७३ पुगेको हो । गत साताको अन्तिम दिन भन्दा ३.७०% गिरावट आएको छ । कारोबार भएका २२३ कम्पनी मध्ये ६ कम्पनी उकालो लागेका छन भने १७९ कम्पनी ओरालो लागेका छन् । १ लाख २९ हजार १ सय ४२ कारोबार संख्यामा करीब ११ अर्ब २४ करोड रकम र २ करोड ३० लाख ७९ हजार ८ सय ३२ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो ।
कारोबार भएका तेह्र उपसमूहमध्ये १३ उप-समुहकै मूल्य ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढि गिरावट फाइनान्स क्षेत्रमा देखिएको छ । यस क्षेत्र ८.०१% घटेको हो । बैँकिङ्ग क्षेत्रमा २.२७%, बिकास बैंक क्षेत्रमा ७.२१%, होटेल क्षेत्रमा ४.४५%, जलविद्युत क्षेत्रमा ६.५१%, लगानी क्षेत्रमा ४.७३%, जीवन बीमा क्षेत्रमा ३.०९%, उत्पादन क्षेत्रमा २.६०%, लघुबित्त क्षेत्रमा २.९०%, गैर जीवन बीमा क्षेत्रमा ३.०९% र ट्रेडिङ्ग क्षेत्रमा ६.०५%ले गिरावट आएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आजको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ३९ खर्ब ४४ अर्ब बराबर पुगेको छ । कारोबार रकमको आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड लगभग ७० करोड ३३ लाख बराबरको रकम सहित प्रथम स्थानमा पुगेको छ । संख्याको आधारमा पनि सोहि कम्पनी १० लाख ९० हजार ४ सय १७ कित्ता सेयर करोबार सहित शिर्ष स्थानमा रहेको छ ।
टप गेनर्समा परेको सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको ९.९७% मुल्यबृद्दिका साथ लगभग सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । मनकामना स्मार्ट लघुबित्त बित्तिय संस्था लिमिटेडको पनि ४.०२% मुल्यवृद्दि भएको छ । यसैगरी, गुराँस लघुबित्त बित्तिय संस्था लिमिटेड, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड र माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड पनि टप गेनर्समा परेका छन् ।
नारायणी डेभेलपमेन्ट बैंक किमिटेड, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, बेस्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, जानकी फाइनान्स लिमिटेड सहित १३ कम्पनी भने नकारात्मक सर्किट तहमा कारोबार भई टप लुजर्समा परेका छन् ।
NEPSE daily updated : 05-09-2021
NEPSE Volume and cumulative A/D line Last Updated 05-09-2021
एडि लाइन र भोल्युम दुबै घटिरहेको हुनाले बजार डाउनवार्ड ट्रेण्डमा जाने संकेत गरेको छ । समग्रमा आजको गतिबिधिले बजारको डाउनट्ररण्डलाई पुष्टि गरेको छ। तर, डाउनट्रेण्डमै रहे पनि २७०० बाट बजारले बलियो सपोर्ट पाएर बाउन्स हुने प्राबिधिक विश्लेषणले देखाएको छ ।
करीब ११ अर्ब २४ करोड रकमको सेयर कारोबार हुँदा टप टेनमा परेको इम्पेरियल सेक्युरिटिजको एक अर्ब भन्दा माथि कारोबार भएको छ ।
ब्रोकर विश्लेषण (05-09-2021)
Previous: नेप्से २९५० को सपोर्टलाई तोड्दै ओरालो, २८००-२८८० को सपोर्टलाई पच्छ्याउदै
Next: अबको सेयर बजार कता? बाउन्स ब्याक वा बियरिस?
1 thought on “डाउनट्रेण्डमा बजार : २७०० मा सपोर्ट”
shiv Narayan mahato says:
यहाँ कुनै विश्लेषकले गरेकाे विश्लेषण मिल्दैन । अस्तिसम्म याे लालटिनले २८०० भन्थ्याे । अाज २७०० । केही भर छैन । यिनिहरूकाे ।
तर बास्तविक्ता २७८० भन्दा मुनि झर्दैन हाेला । त्यसैले डराएर काेही पनि नफालााैाैंाैं।